Buy kyee pown selection or health selection pack in Kamaryut on ipivi.com
kyee pown selection or health selection pack
Active on site: 209 days
Views: 41 (+1)
၇မျိုးပါဝင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူ ပစ္စည်း set ကို
သံလိုက်ဓာတ်ပါဝင်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာကို နွေးစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဖျား ခြေဖျား အေးသူများအတွက် အသုံးပြုရ သင့်တော်စေ
နာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေသဖြင့် သက်ကြီး ရွယ်အိုများကို
လက်ဆောင်ပေးရတာ မျက်နှာပန်း လှစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုခု မတည့်တာ ရှိရင် ဆရာဝန်နဲ. ငြိနှိုင်းပါ။
အမြဲတမ်း ဆေးကြောဖို. တိုက်တွန်းပါတယ်။
ပထမဆုံး အသုံးမပြုခင်လည်း လျော်ပေးပါ။
သို.သော် ရေပူနဲ.တော့ လျော်ခွင့် မပြုပါ။
1,Avoid washing mixed with other clothes,to prevent staining
1,Do not use on trauma.People who easy to suffer from dermatitis and sensitive to rubber or cross infection should wear it with caution,wear during sleep is not recommended
2,If there isarash or other questions,please stop using and consult your doctor advice
45000 kyats (Delivery free in Yangon)
အစုံလိုက်ရောင်းတာ ဖြစ်လို. တစ်ခုချင်း မှာလို. မရပါ။
Name: kyee pown selection or health selection pack
Active on site 209 days